कहाँ–कहाँ चिप्लिए कम्युनिष्ट सरकारका मन्त्री अधिकारी ?::Best News Portal In Nepal, Business News, Political, Social, Science, Economy, Social, Entertainment, Nepali Model, Movies, Actors, Actor, Interview, Audio & Video.
कहाँ–कहाँ चिप्लिए कम्युनिष्ट सरकारका मन्त्री अधिकारी ?
काठमाडौं – दुई महिना अगाडि पूर्व एमाले निकटका पत्रकारलाई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रविन्द्र अधिकारीले राखेको रात्रिभोजमा दुई समूहबीच झण्डै कुटाकुट भयो ।
आफ्नो एकसय दिनेको कार्यप्रगति विवरण सार्वजनिक गर्नुभन्दा दुई दिन अगाडि अधिकारीले दरबारमार्गको एक होटेलमा मदिरासहितको रात्रिभोजको आयोजना गरेका थिए । त्यो भोजमा मदिराले मात्तिएका दुई व्यक्तिवीच भनाभन भएपछि उत्पन्न भएको परिस्थितिलाई मन्त्री अधिकारी आफैले ह्याण्डल गरेका थिए ।
यी र यस्तै खालका विवादमा आइरहने मन्त्री अधिकारी फेरि अर्को विवादमा परेका छन् । वाइड बडी विमान खरिद प्रकरणमा बाइट लिन पुगेका एभिन्यूज टेलिभिजनका पत्रकारको माइक खोस्न खोजेर उनले अहंहिष्णुता देखाएका छन् । अर्बौं पर्ने विमान खरिदमा भएको अनियमितताका बारेमा प्रश्न सोध्ने पत्रकारको दायित्व र कर्तव्य हो । जवाफ दिनुपर्ने दायित्व मन्त्री अधिकारीको हुन्छ । तर, मन्त्री अधिकारीले जवाफ दिनुको साटो पत्रकारको माइक खोस्न खोजे । उनको त्यो हर्कतले मन्त्री अधिकारी कुन स्तरसम्म तल झर्छन् भन्ने देखाएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नजरमा मन्त्री अधिकारी परेका छन् । राम्रो काम गरेर भन्दा पनि अधिकारीलाई विवादमा आइरहने मन्त्रीका रुपमा ओलीले चिन्न थालेका छन् । ओलीको सचिवालयका एकजना सल्लाहकारले भने, ‘रविन्द्र अधिकारीज्यू विवादमा आइरहनु भएको छ । प्रधानमन्त्रीज्यीले नोटिस गर्नुभएको छ ।’ यूनाइटेड पोष्ट साप्ताहिकले समाचार छापेको छ ।